Inés del Alma Mía: Irhafu ka-Allende kubomi buka-Inés Suárez | Uncwadi lwangoku
Ines zomphefumlo wam
UJuan Ortiz | 08/08/2021 22:46 | Ababhali, Iincwadi, Inoveli
Ines zomphefumlo wam yinoveli yembali ngumbhali owaziwayo u-Isabel Allende. Ishicilelwe kwi-2006, iyelenqe libalisa amava omoyisi onesibindi kunye nowaseSpain u-Inés Suárez kunye nendima yakhe ekhokelayo kwinkululeko yaseChile. Libali eliyinyani elixela ii-adventures, ilahleko kunye nemizabalazo yabantu abaninzi abathandayo kwiLatin America, ngakumbi ekubanjweni kweChile ngabaseSpain.
U-Allende wenze uphando olunzulu ngeziganeko ezenzekileyo ukwenza ukuba umsebenzi uthembeke ngangokunokwenzeka.. Ukongeza kwimbeko ebonakalayo ehlawulwa ku-Inés Suárez, le ncwadi ibonisa amava kunye neengxabano zamanye amanani abalulekileyo, anje ngo: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia no Rodrigo de Quiroga. Ngo-2020, uthotho olungaziwa ngabantu inoveli lwakhutshwa yi-Prime Video, eyayiveliswa yi-RTVE, iBoomerang TV kunye neChilevisión.
1 Isishwankathelo se-Inés del alma mía
1.1 Ukuqala kwebali
1.2 IYurophu (1500-1537)
1.3 Ukuqala eMelika (1537-1540)
1.4 Uhambo oluya eChile (1540-1541) kunye nokusekwa kweSantiago de Extremadura (1541-1543)
1.5 Uhlaselo eSantiago
1.6 Iminyaka enzima (1543-1549)
1.7 Iminyaka edlulileyo
2 Malunga nombhali, Isabel Allende
2.1 Isabel Allende iincwadi
Isishwankathelo se Ines zomphefumlo wam
Xa wayeneminyaka engama-70 ubudala, u-Inés Suárez —Waziwa ngokuba ngu-Inés de Suárez— uqala ukubhala ingxelo ngobomi bakhe. Injongo yokubhala olu hlobo lwedayari kukuba intombi yakhe yesibini u-Isabel ayifunde kwaye nelifa lakhe lingalibaleki. Ukongeza, ixhegokazi lilangazelela usuku olunye lokuzukiswa ngesikhumbuzo sezenzo zalo.
UAgnes Wazalelwa ePlasencia (e-Extremadura, eSpain), kwisangqa sosapho esithobekileyo. Ukusukela kwiminyaka esibhozo ubudala, ukukwazi kwakhe ukuthunga nokuhombisa kumnceda ukuba axhase usapho. Ngexesha leveki engcwele wadibana noJuan de Málaga, awatsala kuye ukususela kumzuzu wokuqala. Ngaphezulu kweminyaka emithathu babenobudlelwane obunomdla. Kamva Batshata kwaye bafuduka ukuya eMalaga.
Emva kweminyaka emibini bengakwazi ukukhulelwa, umtshato wabo wajika waba nobutshaba. UJuan uthathe isigqibo sokulandela amaphupha akhe kwaye waya kwihlabathi elitsha, wabuyela ePlasencia, apho wafumana khona iindaba zakhe ezivela eVenezuela. Emva kokulinda ixesha elide, U-Inés wafumana imvume yasebukhosini yokudibana nomyeni wakhe. Waqala iMelika ukumfuna kunye nenkululeko awayeyilangazelela.
Ines yomphefumlo wam ...
Ukuqala eMelika (1537-1540)
Emva kohambo oluninzi, U-Inés wafika kwizibuko laseCallao ePeru, kwakamsinya waya nefriars esiXekweni seKumkani (ngoku eyiLima). Apho wabuza malunga nomyeni wakhe, kwaye ekugqibeleni yafunyanwa Ijoni ngubani owayemazi, le wamxelela ukuba Juan wafa kwidabi Las Salinas. Ukusuka apho, u-Inés wagqiba kwelokuba aye eCuzco ayokufuna iimpendulo kwizinto ezingaziwayo malunga nomyeni wakhe ongasekhoyo ngoku.
Ngokukhawuleza kwavakala ukuba umhlolokazi wayekho kuloo mazwe, ngenxa yesi sizathu, iRhuluneli yaseMarquis UFrancisco Pizarro wayefuna ukudibana naye. Emva kokubuza u-Inés —uqinisekisile ukuba akafuni kubuyela eSpain—, Umlawuli wamnika indlu yokuhlala. Nje ukuba ifakwe apho, i-Inés wadibana noPedro de Valdivia, awayenonxibelelwano naye ekuboneni kokuqala, ukusukela ngalaa mzuzu bobabini baba yinto engenako ukwahlulwa.
UValdivia wayefuna ukukhulula iChile, kanye njengokuba uGeorge de Almagro wazama; xa ndiphawula ku UAgnes, yena Uye wathi uzakumkhapha. Bahamba kunye baya kwiSixeko saKumkani ukuya kucela isigunyaziso kuPizarro, owathi, emva kwexesha lothethathethwano, wasamkela isicelo. A) Ewe, bobabini baqala ukhenketho kwindlela yentlango, ehamba noJuan Gómez, uDon Benito, uLucía, uCatalina kunye namajoni aliqela.
Uhambo oluya eChile (1540-1541) kunye nokusekwa kweSantiago de Extremadura (1541-1543)
Yohambo basebenzise imephu ezotywe nguGeorge de Almagro, owayedalele ukuba ikwazi ukukhokela ukubuya kwakhe. Emva kweenyanga kwikharavani, bamisa inkampu iiveki eTarapacá ngelixa belinde ukuqiniswa. Sele belahlile ithemba, iqela lamadoda likhokelwa nguRodrigo de Quiroga kunye neenkokheli ezinje ngoAlonso de Monroy noFrancisco de Villagra bafika.
Kwiiveki ezimbini kamva, baqala umsebenzi onzima entlango. UValdivia, u-Inés, amadoda abo kunye neeYanaconas bakwazi ukufikelela kumazwe aseChile kwiinyanga ezintlanu. NgoFebruwari 1541, nasemva kokoyisa uhlaselo lweentshaba, uPedro de Valdivia wagqiba kwelokuba aseke isixeko saseSantiago de la Nueva Extremadura. Amazwe asasazwa kwaye kwiinyanga ezimbalwa indawo yayiphumelela wonke umntu.
NgoSeptemba 1541, ngelixa uValdivia wayephumile eSantiago, U-Inés walumkisa uQuiroga, kuba indimbane yabantu yayisiza kubo. Waqala njalo ke umlo omkhulu wokukhusela umhlabaBakwazile ukulawula imeko, nangona isixeko besingamabhodlo, uninzi luswelekile lwenzakele. U-Inés wayenomdla omangalisayo emfazweni, walwa ecaleni kwamadoda de kwaba sekupheleni.
UValdivia wafika kwiintsuku ezi-4 kamva; Nangona wayebuhlungu, wabakhuthaza ukuba baqale, bememeza: "Santiago kwaye vala iSpain!"
Iminyaka enzima (1543-1549)
Emva kokuba uSantiago eqhekekile, Bonke bafuna ukubuyela ePeru, kodwa uValdivia akazange abavumele. Endaweni yoko, wacela uCuzco ukomeleza ukwakha isixeko kwakhona; ngelixa oko kwakusenzeka, baphila iminyaka emibini yosizi olunzulu. Xa unxibelelwano nelizwe leInca lafezekiswa, bathumela izinto kwaye yonke into yaqala ukuphucula, ke iSantiago yabhengezwa njengekomkhulu lobukumkani.
Valdivia Ndandingonwabanga, kulungile Ndifuna ukukhulula eminye imimandla eChile -Izinto ezazilawulwa ngabakwaMapuches- kwaye bangenelela kwimicimbi yasePeru. Kungekudala, wahamba nabanye abaphathi, into engathandanga nabalandeli bakhe, ababephethe iVillagra. Emva kokuhamba kwale ndodaU-Inés waziva engcatshiwe kwaye njengokuba ixesha lihamba Wazimela kwiingalo zaseQuiroga.
Kwi 1549, amajoni amabini aseLa Serena Isixeko esisandula ukusekwa—bafika eSantiago neendaba zokuba bahlaselwe ngamaIndiya. Uqhushululu lwaluza kubafikela kungekudala, ngenxa yesi sizathu uloyiko lwangena phakathi kwabahlali. Kwagqitywa kwelokuba i-Villagra izakuqhubeka ukulungisa le meko, wazuza isivumelwano soxolo, kodwa yayingaqinisekanga, wonke umntu wayefuna ukubuya irhuluneli.
Emva kweenyanga ezimbalwa zokulwa, UValdivia wakwazi ukushiya iPeru, kodwa kungekudala wabizwa nguViceroy La Garza. UPedro kwafuneka ajongane nezityholo ezininzi, ke ngoko wabuyela kwityala lakhe. Nangona le ndoda ibonakalisile ukuba imsulwa, isigwebo sicele u-Inés ahluthwe ubutyebi bakhe abuyele ePeru naseSpain.
U-Inés akazange avume ukushiya iChileNgoko ke, Ugqibe kwelokuba atshate noRodrigo de Quiroga, kuba ngale ndlela wayengayi kuphulukana nepropathi yakhe, kwaye kwakungayi kufuneka ahambe. Wafunga ngothando olungagungqiyo nokuthembeka kule ndoda, esele ikhathalele intombi yakhe u-Isabel. Bobabini bahlala kunye ixesha elide Kude kwaba bayafa - kwaye balwa neMapuches kuhlaselo lwabo lokuqala.
Malunga nombhali, Isabel Allende
Umbhali Isabel Angelica Allende U-Llona wazalwa ngo-Agasti 2, 1942 eLima, ePeru. Abazali bakhe yayinguTomás Allende Pesce noFrancisca Llona Barros; emva komtshato wabo ngo-1945, UIsabel wahamba nonina kunye nabantakwabo baya eChile, apho ahlala khona iminyaka emininzi.
Emva koqhushululu eChile ngo-1973, uAllende kwafuneka aye elubhacweni eVenezuela kunye nomyeni wakhe nabantwana (ukusukela ngo-1975 ukuya ku-1988). Ngo-1982, wapapasha inoveli yakhe yokuqala: Indlu yeMimoya; Ngombulelo kulo msebenzi, wazuza ukuqaqamba okukhulu kwihlabathi liphela. Ukuza kuthi ga ngoku, umbhali odumileyo upapashe iincwadi ezingaphezu kwama-20, athe ngazo woyisa ngaphezulu kwe-75 yezigidi zabafundi kwihlabathi liphela.
Ezinye zezona zinto zibalaseleyo kwindalo yakhe zezi: Isicwangciso esingenasiphelo (1991) Paula (1994) Isixeko samarhamncwa (2002) El Zorro: ilivo iqala, Inés del alma mía (2006) Incwadana kaMaya (2011) Umthandi waseJapan (2015); kunye neposti yakhe yamva nje: Abafazi bomphefumlo wam (2020).
Isabel Allende iincwadi
Umfazi otyebileyo we-porcelain (1984)
Zothando nezithunzi (1984)
UEva Luna (1987)
Isicwangciso esingenasiphelo (1991)
Ntombi yethamsanqa (1998)
Umzobo kwi-sepia (2000)
Isixeko samarhamncwa (2002)
Ilizwe lam eliqulunqiweyo (2003)
Ubukumkani benamba yegolide (2003)
Ihlathi leePygmy (2004)
El Zorro: ilivo liqala (2005)
Ines zomphefumlo wam (2006)
Isiphumo seentsuku (2007)
Abathandi beGuggenheim. Umsebenzi wokubala (2007)
Isiqithi esiphantsi kolwandle (2009)
Incwadana kaMaya (2011)
Umdlalo weRipper (2014)
Umthandi waseJapan (2015)
Ngaphaya kobusika (2017)
Ixesha elide lolwandle (2019)
Abafazi bomphefumlo wam (2020)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Ines zomphefumlo wam